CBD ho an'ny fanaintainana fanaintainana | CBD tsara indrindra amin'ny 2021
Mety hisy vokany hafa amin'ny CBD ho an'ny fanaintainana
Cbd, fohy ho an'ny cannabidiol, dia mandalo ny fanekena ho toy ny "it" fanampin-tsakafo vaovao, izay mety hitsaboana aretina isan-karazany, izay misy, ny tebiteby, ny fanaintainana ary ny tsy fahitan-tory, mba hanisa vitsivitsy fotsiny. Misy amin'ny endrika maro izy io, avy amin'ny Krema CBD ary menaka amin'ny sakafo sy zava-pisotro ampidirina amin'ny CBD. Fa tena miasa ve?
Ny Cbd dia iray amin'ireo fitambaran'ny zavamaniry Cannabis Sativa. Ny marijuana dia avy amin'ny Cannabis Sativa ihany koa, fa ny CBD dia tsy manana singa psychoactive an'ny tetrahydrocannabinol (THC), izay singa mavitrika amin'ny marijuana. Ireo fitambarana roa ireo dia misy fiatraikany amin'ny rafitra endocannabinoid izay ananantsika amin'ny vatantsika. Ity rafitra ity dia miandraikitra ny fanodinana fanaintainana, fahazotoana ary fahatsiarovana, ankoatry ny hafa.
Na dia tsy misy porofo ara-pitsaboana tena misy aza ny vokatry ny CBD amin'ny vatana, indrindra noho ny faritra volondavenona efa ela izay no nisy ny CBD, dia misy porofo fa amin'ny ambaratonga ara-pahasalamana dia azonao atao ny mampiasa CBD hanamaivanana ny fanaintainana.
Na dia tsy misy fampahalalana ampahibemaso momba ny fisedrana klinika momba ny fampiasana ny CBD ho an'ny fanamaivanana ny fanaintainana, fanadihadiana maro no nanaporofo fa ny CBD dia afaka mampihena ny fanaintainana sy ny fivontosana, miaraka amin'ny tombony misy azy io dia vitsy ny vokany. Ankoatr'izay, nitatitra ny olona fa ny CBD dia manamaivana ny fanahiany sy ny tsy fahitan'izy ireo torimaso, ireo toe-javatra izay matetika mifandray amin'ny fanaintainana maharitra. Amin'ny alàlan'ny fananganana ara-dalàna ny CBD azo avy amin'ny hemp any amin'ny fanjakana maro (izay tsy misy THC), olona maro no nitodika tany amin'ny CBD ho fomba iray hafa hanamaivanana ny fanaintainana.
Manolo-kevitra ny olona mijaly amin'ny fanaintainan'ny fanaintainana maharitra hiresaka amin'ny dokotera momba ny fandraisana CBD ho fomba hafa. Na eo aza izany, misy torohevitra vitsivitsy ho an'ireo maniry hanandrana CBD noho ny fanaintainana:
Tsy ny fifohana sigara no fomba tsara indrindra: ny sigara dia mety hanimba ny havokavoka, ankoatr'izay, tsy ny fomba haingana indrindra ahazoana fanamaivanana.
Zava-dehibe ny fomba fitantanan-draharaha: ny CBD dia tsara kokoa raisina amin'ny tincture mba hahazoana vokatra haingana, na amin'ny pilina na kapsily gel malefaka, ho an'ny famotsorana lava kokoa.
Vidio avy amin'ireo mpaninjara malaza. Toy ny vitamina sy suplementaires hafa, ny CBD dia tsy fehezin'ny FDA, noho izany dia tsara kokoa ny mahazo azy amin'ny orinasa malaza, toa ny Red Emperor CBD, izay manana vokatra voasedra amin'ny antoko fahatelo.
Aleo manomboka amin'ny doka ambany. Avy eo, ampitomboy miadana, mandra-pahazoanao fanamaivanana lehibe amin'ny soritr'aretinao. Araho ny soritr'aretinao mba hahitana raha manampy anao ny CBD amin'ny fanalefahana fanaintainana.
Ny fanadihadiana natao tamin'ny klinika sasany dia naneho fa na dia menaka voajanahary azo antoka amin'ny ankapobeny aza ny menaka CBD, ny menaka CBD dia mety hiteraka vokatra hafa ihany koa. Ny fahita matetika sy ny hamafin'ireo soritr'aretina ireo dia afaka miovaova amin'ny olona iray mankany amin'ny iray hafa. Ny soritr'aretina mahazatra indrindra dia mety misy:
Fanovana amin'ny fahazotoan-komana
Fanovana amin'ny toe-po
Ny menaka CBD koa dia mety hampitombo ny anzima amin'ny aty, izay mariky ny fivontosan'ny atiny. Ny olona manana aretin'ny aty dia afaka mampiasa CBD, saingy tokony hampiasa menaka CBD izy ireo amin'ny fitandremana faran'izay tsara, eo ambany fiahian'ny dokotera izay afaka manao fitsapana matetika ny haavon'ny anzima ao amin'ny rà.
Ny diloilo CBD dia tokony hialana tanteraka mandritra ny fitondrana vohoka sy fampinonoana. A 2018 fianarana notarihin'ny American Academy of Pediatrics dia nampitandrina ny vehivavy mba tsy hisorohana rongony sy vokatra azo avy amin'ny rongony hafa mandritra ny fitondrana vohoka, noho ny loza mety hitranga izay mety hisy fiantraikany amin'ny fivoaran'ny zaza. Na dia tsy tanteraka ny fandraisan'anjaran'ny CBD aza, CBD dia fantatra fa afaka manivana amin'ny alàlan'ny sakana eo amin'ny placental.
Raha mieritreritra ny hampiasa menaka CBD ianao hitsaboana aretina toy ny fanaintainana, dia alao antoka fa miresaka amin'ny mpitsabo anao ianao mba hahazoana antoka fa io no safidy mety aminao.
PreviousPrevious post:Mino ny mpikaroka fa afaka mitsabo sy miaro ny Coronovirus ny CBD.ManarakaNext post:Ahoana ny fampiasana solika CBD ho an'ny fanaintainana?